जनकपुरका लागि उडेको बुद्ध एयरको विमान अन्तै पुग्यो, तर कहाँ ? — Sanchar Kendra
जनकपुरका लागि उडेको बुद्ध एयरको विमान अन्तै पुग्यो, तर कहाँ ?
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जनकपुरका लागि उडेको बुद्ध एयरको विमानले यात्रुलाई पोखरा पुर्‍याएको छ । बुद्ध एयरको ६०७ नम्बरको उडानबाट जनकपुर पुग्नुपर्ने यात्रु पोखरा पुगेका हुन्।
शुक्रबार जनकपुर जानुपर्ने तर विमान पोखरा पुगेपछि केहीबेर हैरानी समेत बेहोर्नुपरेको यात्रुले बताएका छन् । निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी उडेको बिमानले किन पोखरामा अवतरण गर्‍यो यस विषयमा विमान कम्पनीले केही बताएको छैन ।
‘२ बजे उड्ने भनेको बिमान ३:१५ मा उडेको थियो । पोखरामा आधा घण्टा रोकिएपछि विमान पुनः जनकपुरका लागि उडेको थियो। पोखरा विमानस्थलका प्रवक्ता देवराज सुवेदीले जनकपुर जान भनेर चढेका यात्रु पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि मात्र यसबारे आफूले पनि थाहा पाएको जानकारी दिए ।
भएको चाँहि के हो त ?
विमानस्थलस्रोतका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङमा कम्पनीबाटै खटिएका कर्मचारीको कमजोरीले यस्तो हुन पुग्यो । बुद्ध एयरको उडान नम्बर ६०७ जहाज पोखराका लागि पुर्वनिर्धारित उडान थियो । सोहीकारण दुबै विमानस्थलका कन्ट्रोल टावरले यो जहाजलाइ पोखरा उडानको अनुमति दिए । तर, जहाजमा पोखरा जाने यात्रु बोर्ड गर्नुपर्ने (चढाउनुपर्ने) मा असावधानीबस जनकपुर जाने यात्रु चढाइयो । फलस्वरूपः पोखरा जाने जहाजमा जनकपुरका यात्रु भरेर उडाइयो । यसको सुइँको चालक दलले पनि पाएन ।
हरेक उडानको शुरु र अन्तिममा पाइलट र एयर होस्टेसले गन्तब्यबारे जानकारी दिन्छन् । यो उडानका दौरान पक्कै पनि उनीहरुले त्यो जानकारी दिएका हुनसक्छन्। विमान पोखरा पुग्दासम्म पाइलट र एयरहोस्टेसको ‘एनाउन्समेन्ट’मा यात्रुले किन प्रतिक्रिया दिएननन् त ? यो विषय भने अचम्म लाग्दो भएको विमानस्थलका प्रमुख गुरागाइँ पनि बताउँछन्।
काठमाडौं विमानस्थलबाट पोखराकै लागि निर्धारित उडान भएका कारण पाइलटको समेत यो उडानमा गल्ति नदेखिएको विमानस्थल स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि यस विषयमा छानबिन हुने काठमाडौं विमानस्थलका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
पोखरा विमानस्थलका प्रमुख गुरागाइँका अनुसार जनकपुरका यात्रु बोकेर पोखरा पुगेको जहाजलाइ इन्धन भराएर पुनः काठमाडौंको आकाश हुँदै जनकपुर पठाइएको छ । जहाजले जनकपुरमा सफल अवतरण गरेको छ ।
यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले हप्तामा २ दिन बिदा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शुक्रबार राजधानीमा भएका एक कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले सन् २०२१ लाई आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्षका मनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सोहीकारण दुई दिन सार्वजनिक बिदाको अवधारणा ल्याइएको बताए।
आन्तरिक पर्यटनमा टेवा दिन मन्त्रालयले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको अवधारणा ल्याएको उनको भनाई छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा वाषिर्क ८० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान गर्दै आएको पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड-१९ को महामारीको सबैभन्दा ठूलो मार परेको भन्दै उनले तत्काल ठूलो मात्रामा पर्यटक नआउने अवस्थामा आन्तरिक घुमफिरलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको बताए।
‘अब बल्ल कोरोना भाईरस विरुद्धको खोप प्रयोगमा आउन सुरु भएको छ, खोप शुरु भएपनि अझै एक वर्ष ठूलो मात्रामा विदेशी पर्यटक आइहाल्ने अवस्था छैन’, उनले भने ‘यो समयमा नेपालको पर्यटन बजारलाई मर्न नदिन आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।’
दुई दिने बिदाको अवधारणामा विज्ञहरुसँग अझै छलफल र परामर्श जारी रहेको उनले बताए। कर्मचारीलगायत सबैमा दुई दिनको बिदाले पुनर्ताजगी बनाउने र आन्तरिक पर्यटन समेतलाई टेवा दिन सक्ने भएकोले सरकारले अगाडि सारेको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सही हुन सक्ने पनि मन्त्री भट्टराईको भनाई छ।